OEM Peristaltic Pump Fekitori - China OEM Peristaltic Pump Vagadziri, Vatengesi
Nhanganyaya Peristaltic pombi kubva kune makumi mashanu neshanu mota yekukwirisa ine bracket inokwidziridzwa ine diki saizi, yakapusa chimiro cheiyo peristaltic pombi yekutya zvigadzirwa. Kunyanya mumidziyo, zvishandiso, inotsigira kushandiswa kwemhando dzakasiyana dzemusoro wepombi inogona kushandiswa kuzadzisa inotevera 1140mL / min kutapudza kwemvura. Neye mushandisi yakananga kutyaira yekumhanyisa mota kudzora mashandiro ebasa, uchishandisa pasi, pani inoenderana kuisirwa. Item Paramenters Item Paramenters mota kumhanya （DGpump iye ...
Nhanganyaya pombi yePeristaltic neiyo micro-WX10-14 pombi musoro ne 42 inokwenenzvera mota inoumbwa nediki saizi, yakapusa dhizaini yeperistaltic pombi zvigadzirwa. Kunyanya mumidziyo, zvishandiso zvinotsigira kushandiswa kwe24mL / min kuti uwane zvinotevera kutapurirana kwemvura. Yakatungamirwa nemushandisi yekumhanyisa mota kudzora mashandiro ebasa, kushandiswa kwepasi kana kuiswa kwepaneru, uye inogona kuve inoenderana maererano nemushandisi zvinodiwa paneti yekugadzira chigadzirwa. Parameter ★ mota kumhanya: ≤
Nhanganyaya OEMQS100-01 / WX10-14 / 18 peristaltic pombi yakakurudzira kumhanyisa kumhanya kwe100rpm; yakagadzirirwa micro-pombi musoro, inokodzera kumadziro ukobvu hwe0,8 kusvika 1.0mm hosi, imwechete-chiteshi mana-vhiri kana masere-vhiri. Dhiraivha yakanangana nemushandisi 42-mhando inotsika mota, iko kushandiswa kwakapinza nyoro-kubatanidza kumisikidza, uye yakagadzirirwa maererano nezvinodiwa nemushandisi. Kunyanya mumidziyo, zvishandiso zvinotsigira kushandiswa kwe38mL / min kuti uwane zvinotevera kutapurirana kwemvura. Parameter mota s ...
Tsananguro yechigadzirwa Inosanganisira JY15 pombi musoro, 42 nhanho mota uye Dhiraidhi redunhu bhodhi. Vhoriyamu idiki, Kumisikidzwa kuiswa. inoshandiswa pamidziyo yerabhoritari, Yekushandisa yekushandisa Technical parameter: Simba: DC12V Yekumhanya renji: 0 -100rpm, Speed ​​inogadziriswa: Chinyorwa chinogadzirisa switch, External kudzora kudzora akasiyana siyana kumhanya. Speed ​​kumhanya ； 5 rpm / min Inowanikwa Tubing: 25 #, 17 # Max yakatarwa kuyerera chiyero: 170ml / min Kunze kwekutonga Rudzi: 0-5V, 4-20Ma, 0-10Khz Kukura: 130 * 73 * ...
Nhanganyaya OEM100J akateedzana peristaltic pombi mutyairi neiyo 57 yekumira mota inoenderana dzakasiyana siyana nzira dzekutonga kuti dzigadzire diki, yakapusa chimiro, kudzora kuri nyore kweperistaltic pombi yekutya chigadzirwa chigadzirwa. Kunyanya mumidziyo, zvishandiso zvinotsigira kushandiswa kwe380mL / min kuti uwane zvinotevera kutapurirana kwemvura. DIP chinja neyekunze chiratidzo chekutonga modhi, iyo yekunze chiratidzo inosarudzika 4-20mA, 0-5V, 0-10V, 0-10kHz, uye inogona kupa iko kushandiswa kweRS485 yekutaurirana kudzora zvigadzirwa. Uchishandisa ...